कसरी छुटाउन सकिन्छ त सुर्तीजन्य पदार्थको लत ? — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, विशेष, शिक्षा → कसरी छुटाउन सकिन्छ त सुर्तीजन्य पदार्थको लत ?
कसरी छुटाउन सकिन्छ त सुर्तीजन्य पदार्थको लत ?
November 6, 2015३७१ पटक
बिहान साँझ कसरत तथा अन्य कृयाकलापहरुमा व्यस्त रहनुहोस्, पानी धेरै पिउने बानी बसाल्नुहोस् ।माथिका यी कृयाकलापहरुलाई नियमित रुपमा दोहोर्‍याउनुहोस् जसले गर्दा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई छोड्न सहयोग पुग्दछ । सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई त्याग्नैपर्छ । यसको प्रयोगबाट हाम्रो स्वास्थ्यमा पर्न गएका असरहरु घटाएर स्वस्थ जीवन विताउन तर्फ हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ । किनकी रोग लागेर उपचार गर्नु भन्दा रोग लाग्नै नदिनु वेश हुन्छ ।